WAAYIHII WARSAME Q23AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q23AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q23AAD
Sheekada Cabdiwaaxid kadis ayay Muna ku noqotay, wax ay ugu jawaabto ayay garan wayday. Ugu dambayn Cabdiwaaxid waxa uu Muna ka dhaadhiciyay in ay berri iskoolka timaaddo xafiiskana ugu timaaddo halkaasna ku wada hadlayaan. Muna waa ay aqbashay laakiin waxa ay diidday in ay xafiiska timaaddo maadaama Warsame xafiiska joogo.
Cabdiwaaxid waxa uu Muna u sheegay in Warsame subixii uusan xafiiska joogin ee uu galabtii joogo subixii oo dhanna uu fasal ku jiro sidaas darteed aysan is arki doonin maadaama Muna galabley tahay.
Muna saacad ka hor xilligii ay iskoolka imaan jirtay ayay xafiiskii Cabdiwaaxid ugu timid. Cabdiwaaxid hadal dheerba Muna u ma uusan galin ee waxa uu sheegay arrintii uu xalay taleefanka ugu sheegay. Waxa uu ku beerlaxawsaday in uu muddo dheer jeclaa laakiin uu ku dhiirran waayay in uu sheegto. “anigu nin wayn ayaan ahayn hantina waan leeyahay oo waad ogtahay inta guri ee an magaalada ku leeyahay xattaa Xamar guri ayaan ka dhistay midkii aad rabtid ayaan ku dajinayaa xattaa haddaad Xamar rabtid waan ku dajinayaa ee cidda iigeey hawshana aan dhammaynno” ayuu ku soo gebagebeeyay. Muna dalabka Cabdiwaaxid waa ay aqbashay niyad ahaan inkasta oo aysan asaga haa iyo maya ku oran haddana ayadu runtii si wacan ayay u aqbashay waxa ayna Cabdiwaaxid ku tiri “waan ka soo fakarayaa ee 2 maalmood i sii” Cabdiwaaxid haye ayuu ku yiri.
Muna maqribkii markii iskoolka ay ka baxday ayay saaxiibteed Maryan u sheegtay wixii ayada iyo Cabdiwaaxid dhexmaray. Maryan hadal kale ayada oo aan oran ayay alalaas ku dhufatay Ulululululu! Muna qosol ayay ka dhacday ku tiri Maryan “naayaa hee anigu waliba ninka ma ogolaan ee talo ayaan ku waydiistay ee maxaad la alalaasaysaa?” Maryan waxa ay tiri “ku jarjar hadalka ku jar, maxay tahay talada aad i waydiinayso ma Cabdiwaaxid oo kale ayaa talo loo raadsadaa? Naa aamus nasiib baad leedahay Ilaahay ayaa ku jecel kaa badbaadiyay cunugii xumaa ee saqajaanka ahaaye.” Hadda ma aqbalaa walaaley? Muna ayaa Maryan waydiisay. Ma aqbalaa aa? Ma’daba ka meesha ka saar ee arooska naga soo dadajiya.
Labo maalmood kadib ammin barqo ah ayaa Muna taleefanka isbitaalka ka wacday Cabdiwaaxid. Kaftan iyo sheeko dheer kadib Muna waxa ay Cabdiwaaxid u sheegtay in ay aqbashay codsigiisi laakiin waxa ay shuruud uga dhigtay in uu u ballanqaado in uusan naag kale la guursan doonin xattaa naagtii hore ee saddexda carruurta ah u dhashay uusan ku noqon karin.
Cabdiwaaxid waa uu aqbalay codsigii Muna waxa uuna kula kaftamay in ragga reer Muduggu naag ay fureen aysan ku noqon.
Maalmo yar kadib Cabdiwaaxid waxa uu u gole fariistay Muna waana lagu mehriyay. Asbuuc kadibna aqalgal ayaa loo ballamay.
Warsame iyo Gaboobe ayagu waa warmoog ilaa meherkii Cabdiwaaxid iyo Muna ka dhacay iskoolkiina laga ogaaday. Warsame la yaab ayay ku noqotay in Cabdiwaaxid guursaday Muna. “Ma gabadhii uu sidaan ogaa ugu gefay ee uu yiri wacal bay siddaa ayuu guursaday?” ayuu Warsame iswaydiiyay. Warsame waxaa u caddaatay in Cabdiwaaxid khiyaamay. Gaboobe ayaa Warsame ku yiri saaxiib waa ku martay si xun buu saaxiibkaa kaaga dulbaxay laakiin naagta maba aadan rabin maxaad uga xumaanaysaa? Haddaad adigu diidday ragga kalana ma u diidaysaa? “maya saaxiib Muna ninkii ay doonto ayay guursan kartaa oo waa xor waxa aanse la yaabbanahay khiyaanada Cabdiwaaxid igu sameeyay, haddii uu igu qalqaalin lahaa in aan gabadha guursado wallaahi waan guursan lahaa laakiin in uu ka carar wacal bay waddaa igu dhaho haddana ii dabamareeyo waa wax foolxun” ayuu Warsame ku calaacalay.
Maalmo yar ka hor arooskii Cabdiwaaxid iyo Muna, Gaboobe oo magaalada maraya ayaa arkay Muna waxa uuna Muna ku yiri “haye Muna Alla maxaad qof xun tahay! Arooska la isku casumi maayo sow maahan?”
“ma arooska saaxiibkaa marna macallinkaaga ayaan kugu casumayaa Gaboobow?”
Gaboobe: wa runtaa Muna. Munaay laakiin waxa aan ku waydiiyay maxaa dhacay anigu dhanka Warsame ayaan kaa eegayaye. Muna markii Gaboobe intaas yirk indheheeda illin ayaa soo dhaaftay jawaabna waa celin wayday. Gaboobe ayaa Muna ka codsaday in ay u sheegto waxa dhacay. Cabbaar markii ay aamusnayd ayay tiri “Gaboobow ma doonayn in aan xasuusto Warsame iyo warkiisa ama qof kale u sheego waxa na dhexmaray laakiin maadaama aad saaxiibkiis tahay waxba kaa qarin maayo, maxaan kaa qarinayaa waabad ogtahaye laga na yaabee in aad asaga wax la wadday.”
Gaboobe: maxaa dhacay maxaanse Warsame la waday?
Muna: waad ogtahay waxa uu sameeyay iyo sida uu iigu xadgudbay.
Gaboobe: wallaahi abaayo wax aan ogahay ma ma jiraan adiga iyo Warsame idinka oo dad saaxiibbo ah ayaa iigu dambaysay xattaa in haasaawe idiin dhexeeyo ma ogayn ee aniga ayaa sidaas iska dhaadhiciyay.
Muna: Gaboobe beenaale ayaa tahay adiga iyi Warsame na beenabuurka uu iga sameeyay waad isla ogaydeen.
Gaboobe: Muna isdaji marka hore, marka labaad wax hubso. Anigu beenabuurka aad sheegtay ilaahay magiciisa baan ku dhaartaye waa igu afkaaga.
Muna: Gaboobe ma adiga iyo Cabdiwaaxid ayaan Warsame idiin sheegin in uu khaati iga taagan yahay oo aan waan ku jelahaye i guurso ku wareeriyay? Ma asagaan udinku oran qoftaas waan ka shakiyay in wacal caloosha ku siddo oo rabto in ay asturto?
Gaboobe: yaah! Wacal aaa? Muna xaqiiqdii miyaad rumaysatay in Warsame waxaad fali karo? Muna, aad ayaad u taqaannaa Warsame miyaad rumaysatay in Warsame xumaan intaas le’eg iyo beenabuurkaas kugu sameeyay?
Muna: Gaboobe wallaahi waan rumaysan waayay, Warsame ma ahan qof aan xumaan iyo dhaqanxumo ku aqaan balse warkaan qofka ii sheegay ma ahan ruux aan beenin karo.
Gaboobe: Muna runta haddaan kuu sheego oi sidii Ilaahay igu ogyahay waxaan ogahay aan kuu sheego ma iga ballanqaadaysaan in aadan qof kalw u sheegin?
Muna: waa ballan
Gaboobe: Warsame waa uu ii sheegay in aad jacayl u bandhigatay, wuxuu ii sheegay in uusan aad kuu jecel yahay sidii gabar walaashiis ahna kuu xaqdhawro balse waxa uu sheegay in uusan xilligaan guur diyaar u ahayn. Talo ayuu i waydiiyay waxaana ku iri Warsamow haddaad Muna heshid nasiib ayaad leedahay ee jaaniska ha iska khsaarin. Waan ka fiirsanayaa ayuu igu yiri. Maalin aniga iyo asaga oo xafiiska joogna ayaa Cabdiwaaxid inoo yimid, Warsame ayaa Cabdiwaaxi arrintiina u sheegay talana waydiistay asaga oo Warsame Cabdiwaaxid u sheegay in uusan waqtigaan guur diyaar u ahayn ee kaliya uu waxbarashada xoogga saarayo. Cabdiwaaxid waxa uu kula taliyay in uu faraha kaa qaado sababtana waxa uu ku sheegay in ay khalad tahay gabar nin jacayl u bandhiganaysa ama guur ka dalbanaysa. Cabdiwaaxid waxa kale uu Warsame ku yiri iska naagtaas ka carar hadday doonti huur bay leedahaye. Warsame hadalka dambe ee Cabdiwaaxid aad ayuu uga xanaaqay waxa uuna sheegay in Muna gabar wanaagsan oo akhlaaq leh tahay. Ugu dambayn Cabdiwaaxid waxa uu Warsame kula taliyay in uu waraaq kuu soo qoro. Xaqiiqdu waa intaaa waxa ka badan qofkii kuu sheegay waa nahaab. Haddase waxaan dareensanahay sababta Cabdiwaaxid hadalkaaa u yiri in ay ahayd in uu adiga ku rabay uu na doonayay in uu Warsame kaa reebo waana uu ku guulaystay. Marka Munaay hambalyo wiil iyo caano gabar iyo caano kala hela adiga Cabdiwaaxid. Warsame na doqonimadiisa ha eersado. Waxaadse ogaataa in uusan beenabuurkaaa Warsame kaa faafin waxna ka jirin. Muna oo yaabban ayaa tiri waad mahadsan tahay walaal.
Muna waxaa fajiciso ku noqday dabinka uu Cabdiwaaxid u dhigtay oo dalaq u tiri haddana waxa ay soo xasuusatay warqaddii Warsame u soo qoray ee raalli noqo ku yiri sidaas darteed waxa ay go’aansatay in ayaan Cabdiwaaxid iyo Warsame midkoodnaa wax waydiin oo sheekada dhan halkaaa uga harto. Waxa ayna bilowday in ay isku diyaariso arooska ayada iyo Cabdiwaaxid.
Gaboobe waxa asna go’aansaday in uusan Warsame u sheegin sheekada Muna u sheegtay maadaama Muna iyo Cabdiwaaxid aqalgalayaan waxa uu ka cabsaday in uu Warsame rabsho kiciyo marka uu maqlo beenta Cabdiwaaxid Muna u sheegay.
Maalmo yar ka hor aqalgalka Muna iyo Cabdiwaaxid waxaa la soo gebagebeeyay imtixaankii ugu dambeeyay ee sannadka kaas oo ahaa kii ugu dambeeyay ee Warsame maadaama uu dhammeeyay. Intii imtixaanku socday Cabdiwaaxid ma imaan iskoolka oo fasaax ayuu qaatay waxaa shaqada iskoolka sii waday kuxigeenkiisa. Warsame na intii imtixaanku socday shaqada xafiiska fasax ayuu ka qaatay. Markii imtixaankii dhammaaday Warsame waxa uu ka xiriiray dugsi sare oo Xamar ku yaal kaas oo hadda ka hor Cabdiwaaxid ku xiray lagu la ballamay in uu Warsame waxbarasho u tago. Iskoolkaas oi lagu magacaabo Qaryatayn maamulihiisu waxa uu Warsame u sheegay in uu yimaado 2 asbuuc kadib. Iskoolka waxaa maamusha hay’ad khayriyo Sacuudiga laga leeyahay ardayduna bilaash ayay ku dhigtaan waliba maalin walba oo jimce ah $20 oo magaalo joog ah ayaa ardayda la siiyaa. Iskoolka oo boodhin ardaydu deggan tahay. Warsame waxa uu diyaargaroobay safarka Xamar waxa uu na diyaarsaday dhammaankii agabkii uu u baahnaa, waxa uu la hadlayay walaashiis Fartuun oo Bila deggan asaga oo u sheegay in uu Xamar waxbarasho u aadayo. Warsame maadaama uu Fartuun lacag biil ah u diri jiray waxa uu u sheegay in marka uu Xamar tago uusan shaqayn doonin sidaas darteed uusan biil soo diri doonin. Warsame oo intii uu Abuu Xaniifa ka shaqaynayay xoogaa kuus ah aruursaday ayaa Fartuun u diray biilkii uu hal sano siin lahaa, kun doolar ayuu u diray.
Habeen jimce ah ayaa lagu beegay aqalgalkii Muna iyo Cabdiwaaxid. Labo saac oo habeenimo markii goorsheegtadu ahayd ayaa labaatan baabuur oo cadcad oo nooca Toyota MarkIII ah la isadabdhigay xaaji khamsiin sameecado waa wayn ku xiran yihiin oo heeso ka daaran yihiinna gadaal ayuu ka socdaa. Saacad kadibna waxa hor dhoobteen fillo qurux badan oo Cabdiwaaxid ku lahaa meel aan Abuu Xaniifa ka dheerayn. Aroos laga ma raago lagu ma na raago ayaa hal mar dadkii wada dheheen waana dareereen. Warsame asagu waa uu ogyahay in Muna iyo Cabdiwaaxid caawa aqalgalayaan mase oga waxa dhacaya oo qolkiisa ayuu caro hoos kala soo xirtay waxaana uu shitay heestii Boqorkii codka Maxamad Saleebaan Tubeec ee…
tala cayn wareegtana
la iskuma canaantee
caqli iyo hubsiinaa
cidna eersan maayee
cidla duur wareegaa
ciirsilaa anays dhigay’e
iyo culuuqan gaystoo
Jacayl waa cadaawoo
cidi kaama qaaddee
dawa lay cabsiiyiyo
cashar waan ka quustee
waxa cunaha dhaafiyo
cunto waan ilaawoo
Cirku nimuu kusoo dumay
cidi kama dulqaaddee
dhulku miduu la ciirana
laga caawin maayee
Casharkii i haleelaa
cadkii iga dhameeyoo
Cawa iyo ayaankuba
calaf eebbe weeyee
lama celin karaayee
ciirsila anays dhigay
cidna eersan maayee.